July 29, 2018 - TV Annapurna
यी हुन विश्वका सबैभन्दा बढि बलात्कारका घटना हुने देश
मानिसहरु कम पढे–लेखेको भएको देशमा बलात्कारको घटना बढी हुने जनविश्वास छ । तर, यस्तो सोच्नु गलत हो । एक आँकडाका अनुसार अमेरिका देखि न्युजिल्याण्डजस्ता देशमा समेत महिला सुरक्षित छैनन् । हामी तपाईंलाई विश्वका ५ देशबारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ जहाँ सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने गर्छन् । १. साउथ अफ्रिकाः विश्वमा सबैभन्दा बढी बलात्कार साउन अफ्रिकामा हुने गर्छ । त्यहाँ वर्षमा करिब ५ लाख महिलालाई बलात्कार गरिन्छ । जहाँ ९ मध्ये केवल १ मा बलात्कारको घटना रेकर्डमा दर्ता हुने गर्छ । मेडिकल रिसर्ज काउन्सिलद्धारा जारी रिपोर्टका अनुसार साउथ अफ्रिकाका ४०…
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले बनाएको कम उमेरको अर्बपतिको रेकर्ड अमेरिकाकी एक युवतीले तोड्ने भएकी छन । २३ वर्षको उमेरमा जुकरबर्गले कम उमेरमा बनाएको अर्बपतिको रेकर्डलाई अमेरिकाकी काईली जेनरले तोड्ने भएकी हुन । अमेरिकाको कार्दशीयन परिवारकी सदस्य तथा रियालिटी टिभी स्टार काइली जेनर अहिले २० भइन् । तर, उनको कमाइ ९० करोड डलरभन्दा धेरै पुगेको छ । विश्व चर्चित म्यागजिन ‘फोब्र्स’ले केहीसमय अघि काईलीको सम्पती सार्वजनिक गरेको थियो । रियालिटी टिभी स्टारका रुपमा चर्चित काईली सबैभन्दा सानो उमेरमा धेरै कमाउन सफल ‘विजनेसवुमन’ बनेकी छन । उनको ‘काइली कस्मेटिक्स’ नामको मेकअप…
July 29, 2018 July 30, 2018 TV-Annapurna
डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई एजेण्डा बनाएर बौरिन खोजेको आरोप खेपेको नेपाली कांग्रेस गोविन्द केसीको अनसन सकिएपछि मुद्दाविहीन हुन पुगेको छ । कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेपिरहेको कांग्रेसले गोविन्द केसीको अनसनले राहतको महसुस गरेको धेरैको टिप्पाणी थियो । काँग्रेस केसीकै अनसनलाई टेकेर सरकारलाई घुर्की लगाउन सडक ओर्ली नसक्दै सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार भएपछि अबको रणनीति के बनाउने भन्नेमा अलमलमा छ । बहुमतको सरकारले प्रतिपक्षलाई पल्लो छेऊ पु-याउदैं अघि बढेपछि कांग्रेसले अब सदन तथा सडकमा उठाउने मुद्दाबारे पार्टीभित्र गम्भिर छलफल शुरु भएको नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए । छलफलमा संविधानमा भएको…
July 29, 2018 August 1, 2018 TV-Annapurna
१० वर्षे कान्छा प्रेमी निक जोनाससँग विवाह गर्ने भएपछि सलमान खानसँगको ‘भारत’ फिल्ममा प्रियका चोपडाको सट्टामा क्याटरिना कैफले अभिनय गर्ने पक्का भएको छ। फिल्मका निर्देशक अलि अब्बास जफरले यसको पुष्टि गरेका हुन्। प्रियंकाले फिल्म छाडेको खबर शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो। फिल्ममा क्याटरिना सलमानको जोडीका रूपमा देखिनेछिन्। उनले सेप्टेम्बरबाट फिल्मको सुटिङ गर्नेछिन्। क्याटरिनाको अनुबन्धनबाट आफू खुशी भएको फिल्म निर्देशक अलिको भनाइ छ। ‘म सलमान र क्याटरिनासँग फेरि एकपटक काम गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित छु। विगतमा पनि हाम्रो सहकार्यले राम्रो गरेको थियोए, अलिले भने।
नेपाली टोलीसँग एमसीसी ९ विकेटले पराजित
नेपालले आइतबार मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी)माथि ९ विकेटको जित दर्ता गरेको छ। त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत आइतबार भएको खेल वर्षाका कारण ६ ओभरमा झारिएको थियो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको एमसीसीले ६ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा ४० रन बनाएको थियो। ४१ रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा नेपालले १ विकेटको क्षतिमा ४.४ ओभरमा ४१ रन बनाएको हो। ओपनर सुवास खकुरेले १६ र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १२ रनमा अविजित रहँदा नेपालले जित हासिल गरेको थियो । अर्का ओपनर अनिल साहले ९ रन जोडे । सुवासले १४ बलमा २ चौका प्रहार गरे । ४ बल…
July 29, 2018 TV-Annapurna
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले हालसम्मका नेपाली ओलम्पियनलाई साउनदेखि आजीवन मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । राखेपद्वारा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा शुरुआतका रुपमा ओलम्पियनलाई साउनको भत्ता उपलब्ध गराइयो । असी ओलम्पियनलाई जनही रु तीन हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइएको हो । नेपालले सन् १९६४ मा टोकियोमा भएको ओलम्पिकदेखि सहभागिता जनाउन शुरु गरेको थियो । त्यस्तै पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग) देखि १२ औँ सागका स्वर्ण विजेतालाई पनि सोही कार्यक्रममा पुरस्कृत गरियो । चौरानब्बे ९४ स्वर्ण पदकधारीलाई मासिक रु पाँच हजारका दरले कूल रु ४० लाख वितरण गरियो । विसं…
भूकम्पपछि पर्यटकहरू सहयोगको प्रतीक्षामा
शक्तिशाली भूकम्प गएको इन्डोनेशियाको लोम्बोक टापुको पहाडी क्षेत्रमा सयौँ पदयात्रीहरू उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। पदयात्रीहरू फर्किने पदयात्रा मार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले पदयात्रामा गएका पर्यटकहरू लोम्बोक टापुको रिन्जानी पर्वतबाट तल झर्न नसकेको बताइएको छ। आइतवार विहान ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौँ भवन तथा संरचनाहरू भत्किएका थिए । भूकम्पपछि कैयौँ मानिस घाइते भएका थिए। पीडितहरूको उद्धार गर्ने प्रयासमा अहिले सयौँ उद्धारकर्ताहरू खटिएको बताइएको छ। उद्धार कार्य जारी रहँदा सोमवार इन्डोनेशियाका राष्ट्रपति जोको विडोडो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।
July 29, 2018 July 30, 2018 Annapurna TV
नेपालले मेरिलिबोन क्रिकेट क्लब (एमसिसी) लाई ९ विकेटले पराजित गरेको छ । लन्डन स्थित लर्डस क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण ६/६ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा नेपालले एमसिसीलाई ९ विकेटले पराजित गरेको हो। यसअघि टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको एमसिसीले महेला जयवर्द्धनाको अविजीत २४ रनको साहयतामा निर्धारित ६ अाेभरमा ४ विकेट गुमाउदै ४० रन जोडेको हो। एमसिसीलाइ सस्तैमा राेक्ने क्रममा साेमपाल कामीले २ विकेट लिए। जितकालागि निर्धारित ६ ओभरमा ४१ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले उक्त लक्ष्य ४ दशमलव ४ ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। नेपालका लागि सुवास खकुरेलले अविजीत रहँदै १६ रन जोडे।…
July 29, 2018 July 31, 2018 TV-Annapurna
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो वाइड बडी ‘अन्नपूर्ण’ विमानले यही साउन १६ गते देखि व्यावसायिक उडान शुरु गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार सो विमानलाई उडान अनुमति (एओसी) प्रदान गरेपछि निगमले उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार निगमको पहिलो वाइड बडी जहाजले राति १० बजे उडान गर्नेछ । निगमको जहाजले सातामा तीन उडान गर्नेछ । ‘नाइन एन एएलवाई’ कलसाइन दिएको उक्त वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमानले पुरानो गन्तव्य कतारको राजधानी दोहाबाट आफ्नो पहिलो उडान भर्न लागेको निगमले जनाएको छ ।…